Data a ga-ekesa – International Association Centers Writing Association
Edebere ibe a maka ịkekọrịta data etiti ederede. Ọ bụrụ na ị ga-achọ ka anyị jikọọ na dataset ma ọ bụ ebe nchekwa gị, biko dejupụta fọm dị n'okpuru ibe a. Jide n'aka na ozi gị gụnyere nkọwa nke dataset, webụsaịtị ma ọ bụ URL ebe enwere ike ịnweta ya, yana aha ya.
Ebe nchekwa data ndetu nnọkọ Ebe Ọdee bụ ngwaahịa nke imekọ ihe ọnụ n'etiti Genie Giaimo, Christine Modey, Candace Hastings, na Joseph Cheatle, onye nwetara onyinye 2018 IWCA maka "Ịmepụta ebe nchekwa akwụkwọ: Gịnị Nhazi Oge, Ụdị ntinye, na akwụkwọ ndị ọzọ nwere ike ịgwa anyị banyere ọrụ nke ide ihe. Ụlọ ọrụ."
Project Writing Center Roots Project bụ mpempe akwụkwọ Sue Mendelsohn chịkọtara nke depụtara puku kwuru puku ụlọ ọrụ ide ihe n'ụwa niile na afọ ndị tọrọ ntọala ha. Ị nwere ike itinye ebe ịde ihe na mpempe akwụkwọ ahụ site na dejupụta ya Ụdị ụbọchị ntọala Center ederede.
Akụkọ nleta ụmụ akwụkwọ kwa afọ nke Ode ederede. Akwụkwọ a gụnyere njikọ ederede data etiti gbasara nleta kwa afọ. Ị nwere ike itinye data gbasara nleta ụlọ ọrụ ịde ihe gị kwa afọ site na dejupụta ya Mpempe akwụkwọ mkpesa nleta kwa afọ nke ebe odee.
Aha ma ọ bụ aha ndị ntinye aka(Chọrọ)
URL (ebe enwere ike ịnweta ọdịnaya)(Chọrọ)